Madaxweyne wacad ku maray inuu Afqaan iyo Somali ka soo buuxiyo xadka Yurub - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Ayadoo laga cabsi qabo in xadka Bolan iyo Belaruush uu noqdo midka ugu xiisaha badan maalmaha iyo bilaha soo socda ayaa madaxweynaha ay reer Yurub cunaqataynta saareen ee Belaruush uu wacad ku maray inuu xadka ka soo buuxyo Afqaani iyo Somali.
Waxa hadda dhaxantu ku dishay xadka u dhexeeya Bolan iyo Belaruush soo galooti farabadan oo ka yimi bariga dhexe oo loo malaynayo inay yihiin Suuriyaan iyo Kurdiyiin iyo weliba Afqaani inkastoo Somali faro ku tirisana la arkay.
Inkastoo Somalidu yartahay haddana kama maqnaan karto khadkan aan la garan doonin halka uu ku dambeyn doono maadaama kan Giriigu inta badan hadda adkaadey.
”Maadaama ay dhiigmiiratada Talibaan hadda loo daayay Afqaanistaan waxaan shaki ku jirin in soo galooti farabadan ay hadda imaan doonaan xadadka Yurub ayuu yiri Lukashenko.
”Maraykanka ayaa ka dambeeyay qaska hadda ka jira xadadka Yurub markii uu Afqaanistaan gacanta u geliyay Talibaan, Eeshiya way diidey soo galootiga inay qaabisho haddana meel kale ma hadhin oo soo galootigu aado ayuu raaciyay.
”Waxay soo maraan dalal badan oo ay ku jirto Yukarayn laakiin maadaama Yukarayn ay Yurub gosha ku wadato way ka aamusaan kadibna waxay eeda oo dhan saaraan anaga ayuu yiri Lukashenko waa munaafiqiin.